राजकुमार फिलिपको महाप्रस्थान
राजकुमार फिलिपले बेलायती राजपरिवारका सबै भन्दा बढी बांच्ने शाही सदस्य भएर सय बर्ष पुग्न मात्र दुई महिना बांकि छंदै अप्रिल ९ तारिख शुक्रबार विन्डसर क्यासलमा शान्तिपूर्वक आफ्नो नश्वर चोला त्याग गरे। यति खेर सारा बेलायत मात्र नभएर सिंगो विश्व बेलायती राजपरिवारमा भएको यो अपूरणीय क्षतिमा समबेदना व्यक्त गर्न सहभागी भएको छ। विश्वका मिडिया, पत्र-पत्रिका प्रिन्स फिलिपका रोमान्चक जीवनीहरुले रंगिएका छन्। महारानी एलिजाबेथसंग ७२ बर्ष सुखद बैवाहिक जीवनमा बलियो सारथी बनेर रहेका ड्युक अफ एडिनबरा बेलायती राजपरिवारका एक सम्मानित धरोहर थिए।
सय बर्ष अघि उनका अगाडि पछाडि खासै कोही थिएनन् । उनको जन्म सन् १९२१ को जुन १० तारिखका दिन ग्रीसको कोर्फु द्विपमा भएको थियो। ग्रिक राजकुमार एन्ड्रयू र राजकुमारी एलीसको कान्छो सन्तान थिए फिलिप । उनीमात्र एक वर्षको हुँदा सन् १९२२ मा ठूलो क्रान्ति भयो। सत्तापलटसंगै क्रान्तिकारीहरुले राजतंत्र हटाए। अदालतले उनका पितालाई देश निकाला गरिदियो। त्यसपछि आफ्ना आफन्तसँगै बेलायतीको सहयोगमा भागेर ईटाली आए सबै परिवार। फिलीप आठ बर्ष हुंदा उनकी आमा एलीसले मानसिक संतुलन गुमाईन् र पागलखानामा बन्द गरीयो। त्यस लगत्तै बाबुले अर्को श्रीमती बिहा गरेर फ्रान्स तिर भागे। आमाका बेलायती नातेदारले फिलीपलाई बेलायत ल्याएर स्कटल्यांडको बोर्डिंग स्कुल गोर्डनसटनमा भर्ना गरिदिए । दुखद बाल्यकाल भोगेको एउटा बिदेशी केटो तिनै बेलायती नातेदारको ' थर' लाई अपनाएर पैतृक थर बेटन्बर्गबाट माउन्टबेटनमा रुपान्तरित भए। त्यसपछि फ्रान्स हुँदै उनको परिवार बेलायतमा आएको थियो। त्यतिखेर विश्व दोस्रो विश्वयुद्धको त्रासदीमा थियो। युवा फिलिप पनि रोयल नेभीमा भर्ना भए।
सन् १९३९ देखि एलिजाबेथ फिलिपको प्रेममा पागल भईन्, त्यतिखेर उनि मात्र १३ वर्षकी थिइन् र ग्रीसका प्रिन्स फिलिप १८ वर्षीय नेवी अफिस क्याडेट थिए | उनको डार्टमाउथको रोयल नेवल कलेजको परिसरमा पहिलो देख भेट भएको थियो । उनले सैनिक तालीममा कलेज 'टप' गरे। त्यसकारण उनलाई तत्कालीन ब्रिटिश राजकमारी ' एलिजाबेथ र मार्गरेट' को सुरक्षा ड्यूटी दिईयो। राजकमारी एलिजाबेथ र फिलीपले एक अर्कोलाई मन पराउन थाले। फिलीप २१ बर्षमै ' ब्रिटिश नेभी' को सबभन्दा कान्छो लेफ्टिनेंटको रुपमा दोस्रो विश्वयुद्धको लडाई मा भाग लिन गैसकेका थिए तर प्रेमिका राजकुमारीसंग नियमीत सम्पर्क भैरहन्थ्यो। अहिले जस्तो सम्पर्क गर्ने माध्यमहरु नभए पनि यो बेला सम्म ब्रिटिश दरवारलाई खासै थाहा थिएन यो गोप्य प्रेम कहानी। एकदिन राजकुमारीको अंगरक्षकले 'फिलीप' को आर्मीड्रेसको फोटो राजकमारीको बेडरूममा फेला पारेपछी राजदरवारमा हंगामा मच्चियो । तर राजकुमार र राजकुमारी आफ्नो सच्चा प्रेममा दृढ थिए । दोस्रो विश्वयुद्ध जितेर फर्केपछी 'फिलीप' ले राजकुमारी एलिजाबेथ द्वितीय कि आमा तत्कालिन माहरानी एलिजाबेथ प्रथमलाई चिठ्ठी लेखे। पारिवार छिन्नभिन्न भै टुक्रिएको, खासै उल्लेखनीय पढाई नभएको कुराहरु चले फिलीपका विरुद्ध । उनी युरोपका राजघराना भए पनि उनको परिवारलाई निर्वासनमा खेदिएको थियो र उनी कतै पनि आधिकारिकता नभएका नाममात्रका (पेनिलेस) राजकुमार थिए। तथापि छोरीको प्रेमलाई हार्दिक रुपमा स्वीकार्दै अन्त्यमा रानी एलिजाबेथ प्रथम र राजा जर्ज' ले आफ्नी छोरी राजकुमारी ' एलिजाबेथ द्वितीयको बिबाह "फिलीपसंग गराईदिए ।
२६ बर्षिय फिलीप र २१ बर्षिय एलिजाबेथको सन १९४७ मा राजकीय सम्मानका साथ धुमधामसंग विवाह भयो। यसरि विदेशी भूमिमा निर्वासित एउटा टुहुरो केटो बेलायतको राजघरानामा जोडियो। ७३ वर्षसम्म महारानीको दुइ कदम पछि रहेर जीवनका हरेक उकाली ओरालीहरुमा एउटा बलियो संरक्षण र एउटा अटुट प्रेम प्रवाह गरि रह्यो बेलायती राजतन्त्रलाई विश्व सामू अटल राख्न पर्दा पछाडी को भूमिकामा जुटी रह्यो। यो जोडीले सबभन्दा लामो समय बाच्ने ब्रिटिश राजदम्पती बनेर नयाँ इतिहास रचे। रानी एलीजाबेथ र राजकुमार फिलीप जोडीका ४ छोराछोरी, ८ नातिनातीना र १० पनाती पनातिनी छन।
वातावरण र पुरातात्विक संरक्षण प्रतिको चासो
"तपाईंको देश लोपोन्मुख प्रजातिहरूको व्यापारको सबैभन्दा कुख्यात केन्द्रहरू मध्ये एक हो," सन् १९९१ मा थाईल्याण्डमा संरक्षण पुरस्कार स्वीकार्दा उनले आफ्ना पीडित पाहुनाहरूलाई भनेका थिए।
"के तपाईं अझै पनि एक अर्कामाथि भाला फाल्नुहुन्छ?" सन् २००२ मा रानीसँग अष्ट्रेलियाको भ्रमणमा आदिवासी एल्डरहरूलाई सोधिएको थियो।
उनले आफै र महारानी समेत गरेर २२,००० भन्दा बढी पटक १४४ भन्दा बढी देशको भ्रमण गरे।
फिलिप आफै रानीको संवैधानिक क्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर्न दृढ संकल्पित थिए। यसको सट्टा उनले आफैंलाई करिब ८०० भन्दा बढी च्यारिटीको संरक्षक भएर आफूलाई क्रियाशील बनाइ रहे। पर्यावरण संरक्षणप्रति उनको प्रतिबद्धता स्तुत्य रह्यो विश्व भरि।
शाही कर्तव्यबाट अवकाश
सन् २०१७ मा, ९५ वर्षको उमेरमा, फिलिपले सक्रिय शाही भूमिकाबाट अवकाश लिने घोषणा गरे। स्याण्डरिङ्घम एस्टेटको एक आरामदायी फार्महाउसमा उनले धरै किताबहरु पढेका थिए र पानी रंगका पेन्टहरुसंग खेलेका थिए। प्रिन्स फिलिपले जीवनभर महारानीभन्दा दुई कदम पछि रहेर बेलायती राजतन्त्रलाई सम्मानित बनाउने काम गरि रहे । कमनवेल्थदेखि वातावरण सम्बन्धि च्यारिटीका संरक्षक भएर काम गरे ।
नेपाल र बेलायतबीचको सम्बन्ध दक्षिण एसियाकै पुरानो र सुदृढ कूटनीतिक सम्बन्ध हो । सन् १९०६ मा नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर कुँवरले पहिलो बेलायत भ्रमण गरे । त्यहि भ्रमण नै बेलायत -नेपालको कूटनैतिक निकटताको जगको रुपमा रही आएको देखिञ्छ। नेपालले सन् १९३४ मा लन्डनमा दूतावास स्थापना गरेको हो । नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य र विकासमा बेलायतको निरन्तर सहयोग रहेको पाइन्छ । बेलायती महारानी एलिजावेथ द्वितीयले आफ्ना पति राजकुमार फिलिप सहित दुई पटक नेपाल भ्रमण गरेकी थिइन् सन् १९६१ र १९८६ मा । सन् १९६१ मा उनले चितवनको जंगलमा बाघ र गैडाको शिकार गरेकी थिइन् राजकुमार फिलिप सहित हात्तीमा सवार भएर। अर्को पटक तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेकमा सहभागी हुन सन् १९७५ मा युवराज चार्ल्स नेपालमा आएका थिए । उनी सन् १९८० र १९९८ मा पनि नेपाल आए । उनले नेपालका विभिन्न जिल्ला घुम्दै बेलायती सहयोगका निर्माण भएका परियोजनाहरुको अवलोकन गरेका थिए। सन १९९३ मा राजकुमारी डायनाले पाँच दिने नेपाल भ्रमण गरेकी थिइन् । सन् २०१५ मा भूकम्प गएका बेला राजकुमार ह्यारीले नेपालको भ्रमण गरेका थिए। यसरी दुई देश बीच मैत्री पुर्ण सम्बन्धको बिकास भएको पाइन्छ। केहि समय अघि दुवै देश बिश्वोका राजतन्त्रात्मक मुलुक भएका नाताले पनि दुई देशका शाही परिवारका बीच मित्रवत सम्बन्ध कायम थियो। राजा वीरेन्द्र र दिपेन्द्रले बेलायतकै इटन कलेजमा पढेका थिए।
जीवन क्षणभंगूर छ। जन्म र मृत्यु अवश्यम्भावी छ हरेक प्राणीले भोग्नु पर्ने। को कसरी सकिन्छ हामी कसैलाई थाहा हुदैन। नश्वर जीवनको यो सानो यात्रामा हामी सबै ‘नेम र फेम’ का लागि मरिहत्ते गर्छौं। आफूलाई अजम्बरी ठान्छौं। सधै शक्ति र भक्तिमा टिकाइ रहने नौटंकी रच्छौं । आफ्ना असल कर्महरुले मृत्यु पर्यन्त सम्झने आयतनको निर्धारण हुने सत्यलाई बिर्सन्छौं । मरी सके पछि पनि अन्तिम संस्कारमा समेत आडम्बर राजनीति र देखावटी सम्मानको भोक हामीमा देखिञ्छ। कोभिड महामारीबीच बेलायतको राजदरबारले राजकुमार फिलिपलाई गरेको भावपूर्ण बिदाइबाट हामी सबैले सिक्नु पर्दछ।
उर्जाविद् डा. पौड्याल बेलायतमा बसोबास गर्छन् ।